Samsung Galaxy Note 7 Buyekeza - Izindaba Rule
Samsung Galaxy Note 7 Buyekeza
The Samsung Galaxy Note 7 kuba, ngaphandle kokungabaza, the phablet best uya. Akuve onamandla, egcwele izici ewusizo futhi kancane endleleni ka gimmicks, futhi inikeza Isigaba abanye bamane ungalilahli.
The phablet best uya manje waterproof, nge screen brilliant banana, lokuloba kangcono futhi amakhamera ngokuhlaziya, zihambisana ungumthombo ongumngcingo, umzimba premium
Lesi sihloko osesikhundleni “Samsung Galaxy Note 7 ukubuyekeza: inkosi yabantwana phablets uyabuya” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesine-25 August 2016 06.00 UTC
The Galaxy Note 7 kuyinto ukubuya UK inkosi Samsung sika of the phablets lokuloba elihlomile, kodwa ukhona yini ofuna lokuloba kusaba?
Ngisho noma impendulo ithi "cha" futhi awukaze uthinte "S Pen", Qaphela 7 unikeza enye into. It ingenye amafoni lokuqala bonke ubukhulu ukuthi abasebenzisi ingavula besebenzisa amehlo abo nge isithwebuli esakhelwe in iris lefoni.
phambi Lwalugobile futhi emuva
Bobabili nangemuva kuthiwa agobile emaphethelweni, okwenza idivayisi emincane, naphezu 5.7in Ubukhulu yesikrini diagonal. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The Note 7 kuyinto amathe umfanekiso Galaxy S7 Edge. Isikrini banana uyagoba ekufezeni izinhlangothi ingilazi emuva babanjwa ngendlela efanayo ukuze front. Kukhona iqembu elincane metal emhlabeni ngaphandle. Side-by-side umehluko osobala nje wukuthi Note 7 kancane kakhulu amakhudlwana.
Akuve 7.9mm obukhulu, 153.5mm ubude futhi 73.9mm ububanzi. I S7 Edge kuyinto 0.2mm ohlabayo, 2.6mm isikhathi esifitjhani begodu 1.3mm elincane. The Note 7 ibuye 12g ngoyisiwula kusinda at 169g, ngothi lokuloba ababema. Umehluko azinakwa kuyasetshenziswa, okwenza Qaphela 7 omunye amafoni elula big ukusebenzisa, futhi kwenza izimbangi zayo inhloko, Apple iPhone 6s Plus ne-Nexus 6P, bheka izinto ezakhayo fat cishe zonke isici ibha ukujiya – iPhone and Nexus kukhona kokubili 7.3mm obukhulu.
The banana screen imiphetho kukhona yobuhle ezingaphezu kuka obusebenzayo, kodwa ukuba bagcine ububanzi emincane okwenza ebambe Qaphela 7 kulula kakhulu kunokulandela cishe kunoma iyiphi enye phablet. Kuyangijabulisa esandleni, nge level intuthuko kule imiphetho, zokwakha kanye shape ngaphandle Note odlule.
The 5.7in isikwele screen HD AMOLED ingenye bhá, esicace futhi best engake ngayibona on smartphone, ne abansundu inky kanye nemibala bold. Iyabonakala ngokucacile ngaphandle, okuyinto eziphawulekayo kaningi kalula igezwa zesikrini OLED-based, futhi ungcono ngisho nangaphezu kwanoma ukuthi owufanelekela kuya kakade omuhle S7 Edge.
The Note 7 ubuye waterproof ezindinganisweni IP68 okusho 1.5m for 30 imizuzu ngamanzi agobhozayo. Namachweba avulekele, okusho akukho iminyango fiddly, kuhlanganise slot lokuloba S yayo Pen, Manje okungase ukusebenza underwater esibukweni kakhulu.
Screen: 5.7e isikwele HD AMOLED (518ppi)
Amagama: octa-core Samsung Exynos 8890 noma isikwele-core Qualcomm Snapdragon 820
Isistimu esebenzayo: Android 6.0.1 nge TouchWiz
Ikhamera: 12MP akha ikhamera nge Izifo Ezingosomathuba, 5MP ebheke phambili ikhamera
Ukuxhumana: LTE, Wi-Fi, NFC, USB-C, ukushaja okungenantambo, Bluetooth 4.2 futhi GPS
Ubukhulu: 153.5 x 73.9 x 7.9 mm
ukushaja Wireless nebhethri ngolunye usuku luka
I blue negolide Note 7 ekhangayo enyameni. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The Note 7 ine processor efanayo, Ihluzo kanye nenani RAM njengoba S7 Edge futhi wenza ngokufanayo.
Like the S7 Edge, Qaphela 7 kuyinto kushesha futhi ngokushesha crunches ngokusebenzisa ngabe yikuphi ungase aphonse kulo. It uzizwa ukulayisha ikakhulukazi sprightly futhi usuke phakathi izinhlelo. Split-screen eziningi futhi akusho ukubambezela it phansi, nakuba Umbuso indawo ye it on a screen 5.7in kuyinto debatable.
Impilo yebhethri kancane esidumazayo. The Note 7 amacala fast ngempela, ukushayisa 70% in 50 imizuzu nge zazihlanganisa USB-C ishaja fast, kodwa ibhethri ngeke ume okuningi ningi than suku! ngaphandle ukwelashwa okukhethekile.
Ukusebenzisa it njengoba idivayisi yami eyinhloko, ukulalela amahora ezinhlanu umculo nge-Bluetooth headphones, ukuphequlula usebenzisa izinhlelo zokusebenza amahora amathathu nge namakhulu push imeyili kanye 30 imizuzu udlala ukukhanya, Qaphela 7 wawuqala 7am ngosuku olulodwa kuze 8am ngosuku ezimbili.
Ukushaja okungenantambo wasebenza kahle ngokuphazima kweso ephepheni 5W eyakhelwe libe ifenisha. izindlela Battery-saving, kuhlanganise nalezo iqaphe izinhlelo zokusebenza wafaka labo ungayisebenzisi ukulala yokuzigwema ukuze zingasivimbi ukuba usebenzisa amandla, akhiwa ngezindlela futhi ngathola impilo yebhethri kancane athuthuke njengesikhonzi ukuthi inqubo iphuma kanye.
Kuba futhi Kuyaphawuleka ukuthi ukuphila kwebhetri kulindeleke ukuthi senyuke ngo-azungeze 10%-20% ne unikezele ngezinsizakalo-Android 7.0 Nougat.
Izinhlelo zokusebenza, abantu futhi umsebenzi emaphethelweni umba ephuma empompini encane ohlangothini kwesikrini lwalugobile. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The Note 7 ugijimela version efanayo sokulungisa Android 6.0 Marshmallow esibizwa TouchWiz njengoba S7 Edge, kodwa nezinye izithasiselo ukusekela lokuloba.
Iningi zokuguqulwa Samsung sika Android zinhle, ikakhulukazi njengoba Android 6.0 Marshmallow kuyinto manje yimanje. It has izilungiselelo okusheshayo okwengeziwe, more izindlela amandla okusindisa kuhlanganise uhlelo ukukhomba wafaka zokusebenza engasetshenziswanga ukulala, ukulawula olunzulu phezu izaziso kuhlanganise amandla vibration, kanye esakhelwe blue ekukhanyeni lemifanekiso for ukusetshenziswa sasebusuku.
Amancane izilungiselelo zomsindo emthunzini isaziso bakuvumela ushintshe okukhiphayo phakathi amadivayisi e-Bluetooth ehlukahlukene, headphones kanye izikhulumi yangaphakathi, ngaphandle kokuba Ukunqamula ukuxhuma lutho.
Iqoqo ngezidingo ezincane onqenqemeni ayatholakala, ewusizo ngokushesha ibukela oxhumana nabo noma zokusebenza, kodwa kancane kwalokho. Bangakwazi zisuswe uma ungazitholi ziwusizo. yokudlala Amathuluzi Samsung sika Ungarekhoda game footage, umise izaziso noma izinkinobho uphazamise play and kunganciphisa ukusebenza smartphone sika ukulondoloza amandla ebhethri. Unganciphisa umdlalo ngaphandle too ukuhlaba ikhefu it.
Akukona konke okuhle, Nokho. I Upday Izindaba social aggregator panel on the sasekhaya (owathatha Flipboard on ekuqaleni Samsung Okwamafoi okuhanjwa nawo) Ngathola kuyacasula ngakho mina uyivale. Ngiphinde wahlupheka bug nge new service Cloud ukuvumelanisa Samsung sika, okuyinto uyahlehla okuqukethwe wefoni 15GB samafu Samsung sika, okudale le-Android service iseva media ngokushesha sokukhipha ibhethri.
Abezindaba iseva izimbungulu zivamile nge Samsung Smartphones, ngokujwayelekile ohambisana nesifanekiso izithombe abonakele ikakhulu SD amakhadi, nakuba hhayi kuleli cala njengoba angizange ikhadi le-microSD efakwe ngesikhathi. Ukuvala Samsung Cloud ukuvumelanisa kwaba uwukuphela kwekhambi abakhwabanisi ibhethri engingawuthola. Kungenzeka umphumela usebenzisa idivaysi pre-release; it got izibuyekezo ezimbalwa ngesikhathi Kwadingeka nalo.
Office Microsoft, Skype nezinhlelo zokusebenza OneDrive woza pre-ezifakiwe, okuyinto ingacishwa kodwa hhayi abakhiphe.
Ukubhala amanothi sikhashana isikrini sivaliwe Ukugunda kakhulu njengoba digital post-it inothi. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ezinye izindaba zika Samsung sika ukulungisa software Android kangakanani ukusekela S Pen lokuloba, okuyinto yezindlela ezingcono kakhulu styluses encane etholakalayo. I Inibhu azwela umfutho kakhulu ezincane kuno izinguqulo ezandulele, okwenza kube uzizwe ezinembile kakhudlwana, kanti lonke uhlelo Ilandela kakhulu inqobo nje uma usebenzisa uhlelo lokusebenza Samsung.
Ukusebenzisa lokuloba in Evernote, ngokwesibonelo, kancane lag kwaphawuleka kodwa bazizwa esibukweni nakho okuye kwathuthukisa kwenze like uthathelwe ephepheni okuningi.
Amanothi lokusebenza olusha Samsung sika iqoqa ndawonye iningi lokuloba izici endaweni eyodwa. amanothi ngesandla udonseleka, umbhalo, ukuqashelwa ngesandla, ezilalelwayo kanye nemifanekiso kungenziwa ezazihlanganisa futhi evumelanisiwe nge Samsung Cloud, kodwa kuyadabukisa ukuthi akubona Evernote like Samsung sika S amadala Amanothi.
Ungasebenzisa lokuloba ukwenza izinketho esheshayo yombhalo translation, izichasiselo screen bese usebenzisa iqoqo esiqinile komkhiqizo amathuluzi. I S Pen isebenza esibukweni uma ifoni silele, okuyinto igcinwa ku Samsung Amanothi futhi zingaphinwa esibukweni like inothi post-it.
Zonke izici lokuloba sika lungasetshenziswa lapho isikrini wet, okusho ingasetshenziswa underwater, uma ufuna ngempela. Uma lingasebenzi echwebeni lokuloba ngobunono efonini.
Lokuloba kuyinto ehluke ewusizo zokuphetha imidvwebo encane, imidwebo noma amanothi ngesandla, kodwa hhayi okungaphezu kwalokho. Kodwa inawo ohamba isici esisha: osheshayo gif making. Ungakwazi ukuqopha endaweni kwesikrini ukuze enze gif afinyelela ku 15 imizuzwana.
Isithwebuli zeminwe kabili njengoba inkinobho ekhaya, ne echwebeni USB-C – ngqa Samsung phone – ngokushesha ngezansi. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Isithwebuli zeminwe on the front kuyafana Galaxy S7 Edge futhi esiqinile, beqaphela iminwe yami futhi izithupha kweso esikhathini esiningi. Luphinde kulondeke zokusebenza, ukuthenga kanye namaphasiwedi, njenganoma yimuphi nje omunye Android Marshmallow noma idivayisi kamuva.
Bheka amehlo ami. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The Note 7 LENA ngenye yezinto Smartphones lokuqala ukuba iris ukuskena, elisebenzisa i ikhamera lefoni ukuba alobe bese ucondzanisa amaphethini eliyingqayizivele anamehlo yakho. It uzoba ukufanisa kokubili amehlo akho, futhi isebenza kahle kakhulu, uvula ifoni noma ogunyaza into kungakapheli yesibili.
Kufanele-ke uzolivusa ezingeni iso it thembeke ukusebenza, kodwa bayoqaphela kimi ngisho nomuntu nhla off-isikhungo ngesikhathi ibambene kwesokudla. Angazi ukugqoka izibuko noma ukusetshenziswa contact lens.
Akunjengesikhathi elula njengoba isithwebuli zeminwe, futhi kudinga Swayipha up esibukweni ukuze kusebenze, kodwa usebenza lapho izandla zakho noma isithwebuli zeminwe embozwe, okuyinto kuyoba usizo kakhulu ebusika.
Ikhamera 12-megaphikseli ngemuva has okubonakalayo kwesithombe futhi autofocus ngokushesha, kanye ne-lens fast, uwasebenzisa izithombe ephansi ukukhanya. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The Note 7 ine front efanayo futhi ikhamera emuva njengoba Galaxy S7 Edge, okuyizinto ezinye the best kuyatholakala kwi smartphone.
I ezingemuva 12-megapixel ikhamera fast, mkhulu ephansi ukukhanya futhi kwenza kube nzima ukuthatha isithombe ompofu. Kungathatha RAW izithombe futhi. I ebheke phambili 5-megapixel selfie ikhamera muhle, kodwa sintula imininingwane emihle, ikhiqiza izithombe ethambile-looking ukuthi abanye bangase bakuthole azikhangi ngaphezulu.
Nombukiso njalo-on anganikeza iwashi nezaziso, kanye lephatselene-out of yini edlalayo kusuka Spotify noma ezinye izinhlelo zokusebenza umculo. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I glass emuva inamazinga ngokumangalisayo eliphezulu friction, okwenza kube lula ukugcina okuhle kokukholwa, ubambelele, kodwa futhi kwenza kube uzibuthe zeminwe
Kukhona inzwa inhliziyo beat emhlane ukuthi okumenza ubani uyosebenzisa lokuqapha impilo, kodwa ingasetshenziswa njengendlela inhlamvu selfie ikhamera
Ungakwazi kuphela ukubhalisa izigxivizo zeminwe amane isithwebuli
I sivulekile ikhombisa isikhathi, usuku, ikhalenda noma isithombe, kuye ngokuthi izilungiselelo zakho, futhi kungenziwa okuhleliwe ukuvula noma ukuvala phakathi isethi amahora ukuba hhayi ukugcina kuwe ebusuku, noma ivaliwe ngokuphelele
Nombukiso njalo-on (ebengikuthanda asebenzayo turning ibhethri uvivinyo yami) idliwe azungeze 10-15% yebhethri usuku ngalunye
The Note 7 Kwadingeka isignali esiqine yimuphi smartphone ngatholwa nginegciwane, kodwa wahlupheka abakhwabanisi ibhethri bese yavutha izimo inethiwekhi eminyene of London izitimela
The Samsung Galaxy Note 7 kubiza £ 700 futhi itholakala ngemibala emithathu: black, blue ngegolide emaceleni, nesiliva.
Ukuze uqhathanise, the 5.5e Galaxy S7 Edge kubiza £ 639, the 5.7in Google Nexus 6P kubiza £ 449 (64GB ngu- £ 499) futhi 5.5Apple iPhone 6s Plus kubiza £ 619 (64GB ngu- £ 699), okwenza Qaphela 7 mayelana intengo efanayo njengoba top-ekupheleni izimbangi.
I S Pen uyinto ungasebenzisi sonke isikhathi, kodwa uyangena Ukugunda ngempela okungenani kanye ngosuku kimi, futhi uma ungayisebenzisi ngokuphepha echwebeni ngendlela, hhayi kokuphikisana yobuhle noma ocingweni.
amakhamera, zeminwe Enani, ukushaja okungenantambo, ungangenisi amanzi kanye screen nakho okuhamba phambili. Ngakho kuyinto kufanelekile, uwuqede begodu bazizwa zedivayisi. Isithwebuli iris iyi eseyintsha ezingase zibe usizo ngokwengeziwe lapho ubusika Rolls kanye. Kodwa kuba emaphethelweni lwalugobile bezels encane esikrinini ukuthi kukhona Qaphela 7 kancane best.
Benza ifoni enkulu kakhulu ngizizwa big khulu khulu ubambe – kungcono ukulawuleka ngaphezu kwanoma yimuphi omunye 5.7in phablet ngaphandle umhlatshelo screen umhlabathi.
Okuwukuphela embi ngalo real, okuyinto sekungamakhulu ngayinye Samsung sika Note uchungechunge umkhankaso azungeze August okufanayo, wukuthi software yayo ayisekho kusesimweni. Android 7.0 Nougat kakhulu improved izaziso kanye nempilo yebhethri. The Note 7 zizothola isibuyekezo Nougat, kodwa uma asaziwa.
Buhle: waterproof, screen lwalugobile emuva, zeminwe Enani, iris isithwebuli, ukushaja okungenantambo, slot microSD ikhadi, S Pen, isibonisi brilliant, ikhamera omkhulu
Bawo: not yet Android 7 Nougat, kuphela battery ngolunye usuku luka, ezibizayo
I S Pen Slots aze afinyelele phansi ifoni ngokuchofoza push-inkinobho. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Samsung Galaxy S6 Edge + isibuyekezo: the curvy 'iPhone 6 killer Ngini '
Isigaba, Gadgets, Omakhalekhukhwini, Phablets, Izibuyekezo, Samsung, Samuel Gibbs, Smartphones, Technology
← Android 7.0 Nougat Buyekeza Apple Yembula iPhone Manzi 7 →